June | 2012 | Somaliland Hargeisa City
Halkan ka daawo sawirrada kulankii dhex maray labada madaxweyne ee Somaliland iyo Somalia
Kulankan oo ahaa kulan taariikhiya oo ay ku kulmeen labad madaxweyne ee Somaliland iyo Somalia. Waan markii ugu horreysay ee taariikhda lagu hayo ee ay laba madaxeyne oo Somaliland iyo Somalia ay kulmaan. is gacan qaadaan. Waxaa iyana aad iyana aad iyo aad guul weyn u ah khaasatan madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. in uu saddexda xisbi qaran madaxdoodii ay ju wehelinayeen kulanka dhex marayey labada madaxweyne ee Somaliland iyo Somalia. Waa maalin taariikhiya runtii oo shacabka Somaliland aad iyo aad ugu farxeen. In marka ay arrintu marayso arrin qaran in meel looga soow ada jeesto ee ta xisbiyada dhinac la iska dhigo. Inagoo gacmaha is wada haysana madaxdeena qaranku ay shir noocan oo kale ka qayb galayaan oo heerkan oo kale ah. Khaasatan waxa ay shacabka Somaliland aad iyo aad ugu farxeen in ay arkaa madaxweynihii hore ee Somaliland, Daahir Rayaale Kaahin in uu ka qayb galo kulankan. isagoo bar bar taagan madaxweynaha mminknka ee talada dalka haya ee uu sida qurux badan oo aan dunnida soo koraysa hore uga dhicin ku wareejiyo 27 Juli 2010.
Waxaad kaloo arkayseen xafladii 26 Juun in madaxweyne Ahmed Maxamed M. Siilaanyo ku cauumay madaxweynihii hore ee dalka Somaliland in uu kal soo qayb galao xafladda 52 aad ee ka soo wareegtay, maalintii ay Somaliland xorriyadeeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska.
Magacyada Sagaal Ruux oo ku Dhaawacmay Shil Baabuur oo Goor dhawayd ka Dhacay Galbeedka Magaalada Hargeysa.
Sagaalka Ruux ee ku dhaawacmay Shilkan ayaa lagu Daawaynayaa Cusbitaalka Guud ee Magaalada hargeysa Daawo Sawiradda
Hargeysa (GNS)- Sagaal Qof ayaa ku Dhaawacmay Shil Baabuur oo Goor dhawayd ka Dhacay Jidka Galbeed ee Xaafada Jig-jiga yar ee Magaalada hargeysa oo isku jiidheen laba Baabuur oo kala ahaa Gaadhi Xaajiyad ah oo kuwa Caanaha keena Hargeysa iyo Gaadhi Mark-2 ah.
Kulan taariikhiya oo dhex maray madaxweynayaasha Somaliland iyo Somalia 28 Juun 2012
Halkan ka dhegayso VOA Somali
Madaxweynaha DKMG, Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Somaliland, Axmed Max’ed Max’ud Siilaanyo ayaa goor dhaweyd kulan ku dhexmaray magaalada Dubai ee dalka Emirate-ka.
Kulan oo ay marti-galisay dowladda Emirate-ka ayaa wuxuu daba socdaa shirarkii London iyo Istanbul iyo waliba kulankii toddobaadkii hore magaalada London ku dhexmaray ergooyin ka kala socda DKMG iyo Somaliland.
Ujeedada kulankan ayaa lagu sheegay inay ahayd sidii ay labada dhinac u taageeri lahaayeen hannaanka geeddi-socodka wadahadallada labada dhinac ee bilowday toddobaadkii hore.
Labada mas’uul waxay ku heshiiyeen inay wadahadallo sii socdaan in guddiga labada dhinac loo ogolaado inay sii wadaan wadahadal si loo caddeeyo xiriirka mustaqbal ee labada dhinac dhexmari kara.
Halkan ka daawo waraysi uu tv:ga Royal la yeeshay wasiirka madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi
25 June, 2012 — somaliland1991
Daawo Aljzeera english oo waraysi xiiso leh la yeelatay mrs Joyce Banda oo madaxweynaha dalka Malawi
Dalka Malawi, ayaa markii uu madaxweynohohore dhintay la is waydiiayey cida madaxweyne ka noqonaysa. Waxaa la goáansaday in la eego waxa uu odhanayo qaynuunka dalka Malawi. Waxaana la qaatay sidii uu dhigayey, inkastoo madaxda dalkaasi ay ka soo horjeesteen in Joyce lo magacaabo madaxweyne, maadaamoo ay ka soo horjeeday ama aan ku waafaqsanayn madaxweynihii hore arrimo badan. Haddana waxaa la isku raacay in la raaco waxa uu dhigayo qaynuunka dalka Malawi.
Waxaan xasuustaa 3 maj 2003, xaaladii uu dalkeena Somaliland ku suganaa markaa la soo sheegay in uu geeriyooday Madaxweynihii 2 aad ee Somaliland, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, oo markaa ku geeriyooday Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. Cabaaro markii ay ahayd saacadu 3 galabnimo maalintaas 3 Maj 2003, ee la soo sheegay geerida madaxweynaha Somaliland, in shir deg deg ay isku yimaadeen shir guddonka laba gole ee baarlamanka iyo gurtida, wada hadalo dhex maray labada gudoon ay isku raaceen in la raaco waxa uu qaynuunka Somaliland dhigayo, ka soo sheegayey haddii uu madaxweynuhu geeriyooda ma si kale wax ugu yimaadaan aanu xilkiisa ku gudan karin waxaa xilka la wareegaya madaxweyne ku xigeen. Dad badan ayaa moodayey in si kale arrinta loo maarayn doono wakhtigaas.
Waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay, shacbiga Somaliland ay ku faraxsanaayeen in sidii uu qaynuunku dhigaayey la raacay. Malawina tii ay Somaliland 2003 samaysay ayey imminka 2012 samaysay. Ku dayo wanaagsan.
Halkan ka daawo xukumadda Somaliland oo soo dhawaysay natiijada dalka Masar
Somaliland future discussed in UK (BBC WORLD NEWS)
24 June, 2012 — somaliland1991
21 June 2012 Last updated at 17:17 GMT
Since declaring independence, Somaliland has enjoyed relative peace in contrast to the rest of Somalia, which has been plagued by conflict.
Natiijadii dalka masar oo imminka lagu dhawaaqay
Waxay guddida doorashooyinka ee dalka Masar ku dhawaaqeen natiijadii doorashada madaxweynenimada dalka Masar, najiijadan ku dhawaaqideeda dhawr goor dib loo dhigay . Waxaana ay gushii raacday murashixii ka socday xisbiga akhwaanu muslimiin, Mursi. Dalku waxaa ka talinayey in ku dhaw 2 sanno ciidamada dalkaasi. Wiigii hore eyayey markii albaabada loo laabay baaralamankii ay dadku soo doorteen. Dalka Masar weli looma samayn qaynuun. Madaxweynaha cusub ee la doortayna awoodi waa mid xadidan, maadaamoo aanu dalku lahayn qaynuun qeexayan awoodiisa.
Wasiirkii Hore Ee Maaliyada Oo Si Mug Leh Uga Hadlay Faa’iidada Iyo Khasaaraha Ay S/Land Dhaxalsiin Karaan 8-da Qodob Ee Ka Soo Baxay Wada-Hadalada Somaliland Iyo Somalia
“Dawladd Iyo Dawladd Inaynu U Wada Hadalnaa Waa Shay Wanaagsan, Qodobka Odhanaya Waa In La Soo Afjaraa Arinka Ku Meelgaadhka Ahi Inama Khuseeyo Inaga”
Hargeysa, June 22, 2012 (Haatuf) – Wasiirkii hore ee Wasaarada Maaliyada Somaliland Eng. Maxamed Xaashi Cilmi ayaa soo dhaweeyey in Somaliland iyo Soomaaliya ay u wada-hadlaan qaab laba dawladood ah, kaas oo tilmaamay inay Somaliland Mihiimad wayn u leedahay hadii loo dunidu taageerto inay arimahooda uga wada-hadlaan qaab laba dawladood ah.
Foreign Secretary (William Hague) welcomes historic talks between Somaliland and Transitional Federal Government of Somalia
Foreign Secretary welcomes historic talks between Somaliland and Transitional Federal Government of Somalia
Geeska Afrika oo xogo Dheeraad Ah Ka Helay Jawigii Gudaha Madasha Wada Hadalka Somaliland iyo Somaliya Iyo Dareenada Ergada
23 June, 2012 — somaliland1991
Posted by Mohamed on Jun 23rd, 2012 // No Comment
Hargeysa(Geeska)-Wargeyska Geeska Afrika, ayaa helay xogo kala duwan oo la xidhiidha qaabkii ay u dhaceen wada hadaladii dhex maray Somaliland iyo Somaliya oo ay kala matalayeen laba guddi oo kala duwani, xogahaas oo la xidhiidha qaabkii uu kulanku ku furmay iyo weliba sidii loo wada hadlay.
Kulanka ayaa ku furmay jawi degen oo ay labada dhinac u muuqdeen inay kala maagayaan, waxaana shirka furay dawladda Ingiriiska oo ka warantay ujeedada kulanka, waxaanay dawladda Ingiriisku isku dayday inay si diblomaasiyadeed isugu soo dhawayso labada dhinac oo ay ka dareentay kala didsanaan marka laga reebo salaanta oo ay weheliyeen hadalo kaftan ah oo Somali ah. Intaas ka dibna waxa iyaguna kelmado kooban yidhi labada guddoomiye ee labada wefti oo kala ahaa Maxamed Cabdillaahi Cumar oo Somaliland ka socday iyo Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka socday Somaliya.
Halkan ka daawo shirkii dhex maray Somalia iyo Somaliland
Waxaa maalintii arbacdii ee bishu ahayd 20 juun 2012, ka dhacay dalka Ingiriiska, caasimadiisa meel ka yaa baxssan oo uu ku nasto wasiirka arrimha dibedda ee dalka Ingiriiska. Shirkan oo soconayey 2 cisho. Shirkan oo ay ku kulmayeen labad wadan ee Somaliland iyo Somalia, si looga wada hadalo arrimo dhawr ah. Kulankan oo beryhanba la sugayey marxalado dhawr ahna soo maray. qodobka ugu muhiisman ee Somaliland ku doodaysaa waa in qadiyadda Somaliland in lama taabtaan tahay, halkan qolada kalena leedahay aynu dib u midowno. qodobkan dib baa loo dhigay.
Waxaa la isku raacay 8 qodob inkastoo aanu nr 8 aanu khusayn Somaliland oo uu yahay qodob Somalia u yaala.
Bal haddaba nala daawada shirka jaraa´id ee ay qabteen labada wadan ee Somaliland iiyo Somalia
Waxaa maalintii arbacdii ee bishu ahayd 20 juun 2012, ka dhacay dalka Ingiriiska, caasimadiisa meel ka yaa baxssan oo uu ku nasto wasiirka arrimha dibedda ee dalka Ingiriiska. Shirkan oo soconayey 2 cisho. Shirkan oo ay ku kulmayeen labad wadan ee Somaliland iyo Somalia, si looga wada hadalo arrimo dhawr ah. Kulankan oo beryhanba la sugayey marxalado dhawr ahna soo maray. qodobka ugu muhiisman ee Somaliland ku doodaysaa waa in qadiyadda Somaliland in lama taabtaab tahay, halkan qolada kalena leedhay aynu dib u midowno. qodobkan dib baa loo dhigay.
Waxaa la isku raacay 8 qodob in kastoo aanu nr 8 aanu khusayn Somaliland oo uu yahay qodob Somalia u yaala.
Bal haddaba nla daawada shirka jaraa´id ee ay qabteen labada wadan ee Somaliland iiyo Somalia
Halka ka daawo waraysigii HCTV la yeeshay weftiga Somaliland ee qayb galaya shirka Somaliland iyo Somalia ka dhacaya London
20 June, 2012 — somaliland1991
Halkan ka dhagayso Shir Somaliland iyo Somalia u Furmay (VOASOMALI)
Ridwan Haji Abdiwali | London, UK
Labada wafdi ee DKMG iyo Somaliland waxaa ay isugu jiraan Siyaasiyiin, Wasiiro iyo Xildhibaano ay kala hogaaminayaan Wasiirka Amniga iyo Arrimaha gudaha ee Dawladda KMG Cabdisamad Macalin Maxamud iyo wasiirka arrimaha dibedda ee Somaliland Dr. Max’ed C/laahi Cumar.
Somalia Somaliland oo kulmay
20 June, 2012, 12:36 GMT 15:36 SGA
Chevering House hoyga wadahadalka Somalia iyo Somaliland
Daawo Goolkii ugu quruxda badnaa ee tartanka ciyaaraha kubada cagta ee Yurub oo uu dhaliyey xidiga dalka Sweden ee Zlatan Ibrahimovic
Waxaa beryahanba socday tartankii ciyaaraha kubada cagta ee wadamada Yurub. Sannadkan 2012 oo lagu qabanayo labada dal ee kala ah labada Poland iyo Ukrain. Haddaba waxaa imminka socda oo xalay dhamaaday is reebreebkii hore, iiminkana waxaa loo gudbaya wareegii 2 aad . Haddaba ciyaartii xalay dhex martay labada xul qaran ee Sweden iyo France ayaa ahayd mid, xulka qaranka Sweden ee kubada cagta oo soo bandhigay ciyaarihii looga bartay marka ay si fiican u ciyaarayaan, waxaa shacabka dalka reer Sweden niyad jab ka qaadeen ciyaartii dhex martay Sweden iyo Ukrain oo guushu raacday dalka Ukrain, taasoo eeda badan dusha laga saaray difaaca Sweden oo habeenkaa aad u liitay. Dsalkan Sweden waxa soo maray laacibiin aad u heer sareeya world class:
Haddaba waxa jira xidig u ciyaara xulka qaranka dalka Sweden, oo imminka 30 jir ah, muddo 10 sanno u soo ciyaarayey xulka qaranka Sweden, una soo ciyaaray 10 sanno ee u danbeeyey naadiyada adduunka ugu fiican xaga kubada , sida Barcelona, Inter, Milan, Juventus, Ajax, iyo qaar kale. Xidigan oo ku guulaysaty bilado badan oo wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba. Waa ciyaar yahanay dunnida oo dhan laga yaqaan. Waxaanu ku jiraa laacibiinta dnnida ugu khatarsan xaga gool dhalinta.Zlatan Ibrahimovic, oo ku dhashay 1981 caasimada 3aad ee Sweden, Malmö. labadiisa waalid, hooyadii waxay u dhalatay wadanka Croatia, aabihiina dalka Bosnia.
Waxaa laga qoray bugaag badan, buug ka mid ah bugaagtaa laga qoray Zlatan Ibrahimovic, waxaa 2008 ku guulastay mulkiilaha Somaliland1991. markii wadanka Jarmalka lagu qabtay tartankii ciyaaraha kubada cagta ee sannadkii 2008. Sannadkan waxaa laga dhigay Kaptanka xulka qaranka Sweden, waxaana kaloo la sii dayey nr, ka nr 10.
Halkan hoose ka daawo goolkii ugu quruxda badnaa ee ciyaarha kubada cagta ee imminka ka socda wadamada Polan iyo Ukrain sannadka 2012.
Sweden oo Faransiiska kaga badisay 2-o